Usuku My Pet » How To Date – Old School Style
Igcine ukubuyekezwa: Septhemba. 25 2020 | 3 imiz ufunde
Value kwalokho uthatha phezu cishe konke, kusukela ngalolo mango juice plain manje iqukethe calcium wanezela, esitolo okuyinto uthengisa imikhiqizo wenziwe amafomula ngcono. Nokho, kukhona labo ancamela isikole elidala, ngisho nalapho kuziwa ebuhlotsheni?
Nokho, kungaba vintage ubuhlobo iseluleko basanamathele amanzi in new-age Mantras? Ingabe njengoba ayigugu negolide njengoba? Ake sithole.
Gcina Chivalry alive
Buza noma iyiphi couple, oye waba nobuhlobo eside futhi siphumelele ngalokho wabenza uchofoze futhi bayohlala cishe ukubalula inhlonipho baye balondoloza for nomunye. Just ngoba abesifazane ukulwela ukulingana zonke izinsuku, akusho ukuthi nabo bamatasa bacwaninga Chivalry. Owesifazane kwakusazoba uthande ukuba nobuhlobo umnumzana ngubani ukudansela isiginci sakhe out the isitulo noma ngisho uvula umnyango ngabo. Ukwenza lokhu owesifazane kubonisa inhlonipho futhi kuyinto okufanele waqhubeka ngisho emva komshado.
Imibhangqwana abaye waxabana kufanele azame njalo ukuba uxazulule it out ngomoya ophansi ngaphambi ngokuthi ubusuku. Nokho, ngaphambi one kungaba siyixazulule nezindaba, kubalulekile ukuzola kuqala, njengoba ukuzama ukuthola isisombululo in a state omnene-up kuyomane sibe sibi isimo. Kufanele sikhumbule nokuthi ingxabano kwenzeka nomuntu zingabantu uthando, lowo bahloniphe, ngakho kubalulekile yayo ukuze sixazulule inkinga ngokuthula.
Gcina umlilo uvutha
Uma abantu ababili baqale dating, benza umzamo ukuqinisekisa ukuthi zonke mzuzu uzizwa ekhethekile, yithela uthando . Ukuze ubudlelwano isikhathi eside, Nokho, Imibhangqwana kufanele asebenze kanzima ukuze balondoloze izinga elifanayo lokuzibophezela. Zonke ubudlelwano kufanele ube nezikhathi ezinzima nezimnandi, okuyinto ejwayelekile. Nokho, akufanele nanini sivumele ubuhlobo phindisela esihlalweni. Kufanele aqhubeke ubuhlobo umoya ofanayo njengakuqala, ngoba lokho kuyinto wabagcina ndawonye ngaleso sikhathi futhi ungakwazi namanje abagcine ndawonye esikhathini esizayo.
Zama ukuba singavumeli ukuba usuku luphele ngaphandle ukwabelana a kunconywa ekhethekile. Kungaba kunconywa on kanjani umlingani wakho ibukeka, indlela ababhekana unuka noma ngisho kungakanani bayazazisa. Batshele ukuthi ziyigugu kunegolide eyigugu. Into ebaluleke kakhulu ukuba umuntu abe qotho ngayo izincomo zabo. Kuyinto lezi zinto kancane ukuthi ukwenza ubuhlobo onenzuzo. Lesi seluleko kungase kube vintage , kodwa okusiza bonke ubudlelwano zamanje.
Yabelana a goodbye kiss
Njengoba okuningi njengoba babelana ngokwanga goodbye kungase kuzwakale ngakho elula abangelutho ngombhangqwana ejabulela ubuhlobo babo, kusho lukhulu futhi kushiya okuningi imfudumalo. Ukwabelana a goodbye kiss ingenye yezindlela ezingcono ukuze abonise indlela eyodwa obunothando kungaba nabantu abathandana nabo. Ngaphezu kwalokho, ukwenza lokhu kwansuku kusiza ukuqinisa ubuhlobo, njengoba kuvela uthando abazizwa for nomunye.
Thatha ukudla ndawonye
Ukuthatha ukudla ndawonye kusiza ukugcina isibopho phakathi imibhangqwana eqinile futhi uvuthwa. Gwema izimo lapho oyedwa udla at the ekamelweni lokudlela, kanti omunye at the ekamelweni bayiphendule, ukubukela ithelevishini. Lokhu akuyona enempilo ukukhula yimuphi ubuhlobo. Ukuthatha ukudla ndawonye kunikeza umbhangqwana ithuba uxoxe. Nokho, maziqaphele ukuthi ingxoxo kufanele enze ukudla olujabulisayo, okusho izihloko abangela nokuphikisana kufanele kugwenywe friction. Ingqikithi ukuthatha ukudla ndawonye ukuze uphumule, ngakho khetha izihloko fun ukuxoxa ngalokhu.
Londolozani i ukubukeka ekhangayo ngaso sonke isikhathi
Omunye kumele bakulungele ukuya i imayela by ngcono ukubukeka kwabo njalo, ukuze abukeke kahle for umlingani wabo. Okay, kanjalo Ukugqoka mhlawumbe ngokwabo isudi noma ingubo cocktail kungase akuzwakali ukhululekile nhlobo, kodwa ngokuzigcina ihlanzekile, Muhle futhi kahle wabeka ndawonye kubalulekile. It engathathi umzamo kakhulu ukubheka okuhle umlingani komuntu, ikakhulukazi uma lokhu kuzosiza ekuqiniseni ubuhlobo, njengoba ngamunye abalingani bazokwazi ukugcina passion yabo for nomunye alive.
Ayikho indlela engcono ukufakazela ukuthi elidala kunegolide ngalezi ubuhlobo weluleka. Gold kuyinto metal nababalulekile kakhulu. In the ukuphefumula efanayo, la vintage weluleka awusizo kakhulu ubudlelwano zamanje. Ngakho, kubalulekile ukuba noma ubani nobuhlobo ukuzijayeza lezi amathiphu bese ugcine inhlansi ephila phakade.